SIDEE RUGTA AYAA U MUUQATA MEEL BANNAAN IYO SIDA LOO CIRIBTIRO IYO SHINNI LAGA HELO MEESHAAS - BEEKEEPING
Waxaan u maleyneynaa in "boorashadu" yihiin guryo yaryar oo shinni ah oo la dhisay iyadoo la daryeelayo beera.
Si kastaba ha ahaatee, dabiiciga ah, cayayaanka shaqeynaya ee adag waxay dhistaan ​​xoqin xagga geedaha, geedaha dillaaca iyo laanta.
Qofku waxba kuma laha inuu sameeyo samaynta rugta noocan oo kale ah.
Rugta qoyan - Tani waa deegaan dabiici ah oo shinni ah. Waxay inta badan dhisaan oo ay gurigooda ku helaan geedo, dillaac, godad iyo xitaa dhulka hoostiisa. Waxyaabaha ugu muhiimsan marka la dooranayo meel ay ku noolaadaan waxaa laga ilaaliyaa dabaysha, qorraxda, faya-qabka iyo dhawaanshaha kaydka. Kalluunka ayaa laga ilaaliyaa hawo qabow iyo qoyaan badan, maadaama qaybta kore ee lagu dabiibayo propolis. Qeybta hoose ee beerta waxaa loo yaqaan "bort".
Ma taqaanaa? In beekeeping, qiiqa waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo shinni. Marka sigaarku u muuqdo, shakhsiyaadka waxay leeyihiin dareen ah naftooda-ilaalinta, oo waxay ku kaydsan yihiin malab, ma bixin wax dareen ah.
Qeybtaani waxay leedahay qaab aad u fudud. Isaga saldhigga waa malab. Kuwaasi waxay ka kooban yihiin rugta. Qaab dhismeedka malabku wuxuu ku bilaabmaa heer hoose oo u dhaqaaqaa. Qaybta hoose ayaa loogu talagalay hawo-qaadashada. Haddii daloolka buulkuna uu aad u weyn yahay, ka dibna shinni ayaa u dhaw, oo haddii ay aad u yar tahay, way jabaan.
Ka hor intaan la bilaabin taranka, shinni ay baadigoobayaan aagga waxay raadinayaan meel ay ku noolaadaan. Marka ay helaan fursado ku habboon, raxanku wuxuu qaadaa oo wuxuu dooranayaa ugu habboon iyaga. Macdanta macaanku waxay qalabeeyeen gurigooda meel bannaan oo ku habboon. Iyadoo caawinta propolis, waxay xiraan godadka iyo dildilaaca ee bannaan.
Marka xigta, cayayaanka waxay soo bandhigaan ilaaliye meel u dhow albaabka waxayna bilaabaan inay xirtaan malab, halka kuwo kalena ay sameeyaan malab. Waxay dhacdaa in ay keenaan malab badan oo sidaas darteed waxay u duulaan meel kale, maadaama aanay lahayn meel ku filan oo cidla ah. On geedaha, hudheello shinni ah ayaa la dhigaa si ay u noqdaan koonfurta. Heerka dhererka buulkuna waa inuu noqdo mid la mid ah dhismaha shan dabaq ah.
Ma taqaanaa? Si aad u hagaajiso malab ah malab ah ee rugta ah, shinni ku baxaa wax, taas oo loo isticmaalo sida dhismaha dhismo.
Qaar ka mid ah cayayaanka noocan ahi waxay doorbidaan inay dhisaan finan duurjoogta dhulka. Waxay u egtahay magaalo taariikhi ah oo leh jumlado badan iyo jidad. Dhaqdhaqaaqyadani waa kuwo qalabaysan si aanay u dhicin. Tani waa shaqo adag oo xanuunsan, inta lagu jiro cayayaanka ay isticmaalaan candhuufta oo ay isku qasaan dhulka. Iyada oo isku dhafkan ay xoojiyaan derbiyada guryahooda.
Bees ayaa loo qaybiyaa saddex nooc oo waaweyn: shinbiraha boqoradda, shinnida shaqada iyo darawallada.
Ilmo-galeenka ayaa mas'uul ka ah dhalmada. Waqtiga qaarkood, waxay ka baxaysaa rugta iyo saygeeda, ka dibna soo noqnoqonaya waxayna dhigtaa ukumo ilaa dhammaadka nolosha.
Abuuraha shaqeeyaa wuxuu qabanayaa dhammaan shaqada aasaasiga ah. Mas'uuliyaddooda waa: malab goosashada, quudinta, ilaalinta amarka ee rugta, ilaalinta iyo, dabcan, qaabka of malabs.
Drones waxay ku hawlan yihiin raadinta boqoradda si ay ula falgalaan. Qadada ka hor, waxay u duulaan meelo badan oo diyaaradaha u soo baxa, kuna soo noqdaan waqtiga madow ee maalintii.
Waa muhiim! Waajibaadka shinnida shaqaalaha waxaa loo qeybiyaa iyadoo ku xiran hadba inta ay jiran yihiin.
Miyuu suurtagal yahay in la cuno shinni
Waad kici kartaa, laakiin haddaad go'aansatid in aad xajisid balanqaadkii malabkii duurjoogta ahaa, waa inaad fahamtaa in shaqadani aanay ahayn mid sahlan. Aynu ka hadalno sida loo baadho shinni ka yimaada rugta iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo si loo sameeyo tan.
Ha noqotee ama aan
Dabcan, waad ku ridi kartaa. Si kastaba ha ahaatee, tan waxaad u baahan tahay aqoon. Intaad kudheeresid, waxaa laga yaabaa inaad ku qaadato dhaawacyo kala duwan (boorsooyinka qaar ayaa laga yaabaa inay sarreeyaan) waxayna halis ugu jiraan in qaniino.
Sidoo kale akhri noocyada kala duwan ee beekhaaminta: Dadana, Varre, faro badan, "Boa", Alpine, nucleus, pavilion ("Berendey").
Sida loo helo buulka
Haddii aadan horey u ogeyn meeshii goluhu ku yaal, hawsha lagu helayo waa mid aad u adag. Tilmaamihii ugu muhiimsanaa ee ku yaala keynta waxaa ku yaal rugta godka ee godka joogitaanka kaydka. Haddii aad ku socoto wabiga ama harada, waxaad arki kartaa xayawaanka cayayaanka u dhow biyaha.
Waa muhiim! Haddii aad raacdo beeska ku dhow biyaha, ka dibna jihada dhaqdhaqaaqooda waxay heli karaan gurigooda.
Iska yaree malabyada
Waxaa lagama maarmaan ah in la helo macaanka macaamiisha oo keliya marka aan cidna ka hadhin rugta. Tani, cayayaanka ayaa u baahan in laga cabbiro halkaa. Si aad u sameysid geedi socodkan si dhakhso ah u soco, ku dhaji geed geedka hoose iyo si tartiib tartiib ah u dhaqaaq.
Nidaamka dib u dejinta
Heshiiska ugu fiican guga horey. Xilligan, kalluunka ka yimid malab-growers yar yar, iyo markii ay dib u rarayaan waa mid aad u fudud in lumiyo. Ka saar foostada ka soo rugta duurjoogta ah oo u gudub meesha meesha ay ku yaalliin.
Haddii ay kor ku yaalaan, markaa waxaad u baahan doontaa dabin loogu talagalay kiisaska noocaas ah. Tani waa sanduuq ay ku jiraan afar geesood. Si shinni ah ayaa u duulay, isticmaal shaxanka malab. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad sanduuqa ku dhajiso xadhkaha ilaa dherer oo ka tag. Hubinta dabin waa qiimo kasta 6-9 maalmood. Haddii qashin la shaqeynayo, shinni-yadu waxay degeen dabinkaaga, si tartiib ah hoos ugu dhig sanduuqa dhulka, xidh dhambalka iyo u qaad meesha aad ku sii socotid shinnida mustaqbalka.
Haddii deegaan cusub oo ka mid ah cayayaankaasi ay ku yaalaan wax ka yar 5 km oo ka fog geedkii uu ku jiray meel bannaan, markaas cayayaanka ayaa soo noqon kara. Si looga hortago in tan dhacaan, xiro meel bannaan leh.
Macdanta macaanku waxay dhistaan ​​guryahooda, waana ay adag tahay in laga gudbo halkaas. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raacdo dhammaan xeerarka loogu talagalay kiiskan, guuritaanka ma adkaan doonto.